China Marine Hove Oligopeptide fekitari uye bhizimisi | Huayan
Chinyorwa Chinyorwa: Marine cod hove ganda
Ruvara: Ichena kana yakajeka yero
Hwema: Zvishoma nehove
Molecular Kurema: 500 ~ 1000Dal, 300-500Dal
Feature: High protein, hapana chinowedzera, diki mamorekuru anogona kutorwa zviri nyore.
1.Kunyatso gadzirisa ganda uye mhasuru mwando kudzikisira dambudziko, nenguva inowedzera iyo collagen yekuchengetedza ganda diki.
2.Tightly sunga calcium kune bone maseru, hapana kurasikirwa kana kudzikisira.
3.Chengetedza iyo cornea yakanyorova uye yakajeka, uye wedzera kujeka kwemaziso.
4.Kurudzira kubatana kwepedyo kwemaseru emaseru kuti aite iwo akasimba uye akajeka.
5.Rega iyo endocrine, chengetedza uye nekuwedzera iyo visceral basa.
6.Kubatanidzwa ne immune globulin, kuwedzera hutachiona.
1.Ko kambani yako ine chero chitupa?
Hongu, ISO, HACCP, HALAL, MUI.
2.What ndeupi wako mashoma odha huwandu?
Kazhinji 1000kg asi inotaurika.
3.Kutumira sei zvinhu?
A: Ex-basa kana FOB, kana iwe uine wega anotungamira kuChina. B: CFR kana CIF, nezvimwe, kana iwe uchida isu kuti titumire iwe. C: Zvimwe zvingasarudzwa, unogona kuratidza.
4.What mhando muripo unobvuma?
5.What wako kugadzirwa kutungamira nguva?
Kutenderedza mazuva manomwe kusvika gumi nemashanu maererano nehurongwa hwakawanda uye ruzivo rwekugadzira.
6.Ungabvuma kugadzirisa here?
Ehe, isu tinopa OEM kana ODM sevhisi. Iyo yekubheka uye chinhu chinogona kuitwa sezvamunoda.
7.Ungagone kupa sampuli & ndeipi nguva yekuendesa nguva?
Hongu, kazhinji tinopa vatengi mahara emhando dzatakaita kare, asi mutengi anoda kutora mutengo wekutakura.
8. Uri mugadziri kana mutengesi?
Isu tiri mugadziri muChina uye fekitori yedu iri muHainan.Factory kushanya kunogamuchirwa!
Pashure: Cod Hove Collagen Peptide
Zvadaro: Tilapia Hove Collagen Peptide